China Prohexadione Calcium factory sy mpamatsy | Lemandou
CAS No. 127277-53-6 Milanja molekiola 462,46
molekiolan'ny 2 (C10H11O5)·Ca Bika Aman 'endrika Vovoka mavo volontany
fahadiovana 90,0% min. Teboka mitsonika 360 °C
Residue amin'ny ignition 0,1% max Fahaverezan'ny fanamainana 0,1% max
Ny kalsioma Prohexadione dia afaka manakana ny tsy fitovizan'ny asidra gibberellic amin'ny alàlan'ny fitrandrahana voan-javamaniry, faka ary ravina. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny fanondrahana voa, fanondrahana ary fanasitranana. Raha ampitahaina amin'ireo mpamaky triazole be mpampiasa, ny calcium calcium Prohexadione dia tsy misy poizina sisa tavela amin'ireo zavamaniry mihodina ary tsy misy fandotoana ny tontolo iainana, ka mety hanolo ireo retardants fitomboan'ny triazole izany. Manana vinavinan'ny fampiharana betsaka amin'ny fambolena izy io.
Ny kalsioma Prohexadione dia afaka manafoana ny fanitarana ny tahon'ireo zavamaniry maro, mifehy ny fitomboan'ny vodin-vokatra, mampatanjaka ny tahony, mampidina ny zavamaniry, misoroka ny hipetrahana; mampiroborobo ny fahavokarana, manafaingana ny fitomboan'ny tsiry sy ny fakany, ary mitazona maitso maitso ny tahony sy ny raviny; fehezo ny fotoana voninkazo, ampitomboy ny tahan'ny voankazo ary ampiroborobo ny fahamatoran'ny voankazo. Izy io koa dia afaka manatsara ny fanoherana ny adin-tsaina amin'ny zavamaniry, manatsara ny fahafahan'ny zavamaniry manohitra ny aretina, ny hatsiaka sy ny haintany, mampihena ny fitotoam-pahavoazan'ny herisetra, ka hanatsarana ny fahombiazan'ny vokatra.
Ny kalsioma Prohexadione dia afaka mampihena be ny haavon'ny vodin-kazo sy mampitombo ny vokatra. Ampiasaina indrindra hifehezana ny fitomboan'ny vary, vary orza, varimbazaha ary ahitra, ary misy fanoherana lehibe sy trano misy dwarf. Miharihary ny fiantraikan'ny fanoherana ny trano fandraisam-bahiny amin'ny vary, ary ny fiantraikan'ny fanoherana ny fitomboana amin'ny bozaka dia manan-danja.
Manaraka: Paclobutrazol (PP333)